(tonga teto avy amin'ny Inde)
Ny anaram-pirenena hoe India dia avy amin' ny fiteny persana hoe Sindhu, anarana persana amin' ny fiteny sanskrity, ny renirano Indus. Ny anarana ofisialy dia mampiasa ny teny Bharat (mpanjaka hindoa niaina taona taloha). Ny anarany fahatelo: Hindustan ("tanin' ny Hindoa" amin' ny fiteny persana), dia niasa tamin' ny taonan'ny Empira Môgôly, ilay teny Hindusta n dia tsy ofisialy intsony ankehitriny fa ampiasaina matetika rehefa manonona an' i India.
I India ny firenena be olona indrindra eo aorian' i Sina. Misy fiteny ofisialy roapolo mahery fantatry ny lalam-panorenan' i India. Ny tenim-pirenena dia ny fiteny hindy.
Mivelatra 7 000 km ny India. Mizara sisintany amin'i Pakistana izy any andrefana, miaraka amin'i Sina, i Nepaly, i Bhutan izy any avaratra. I Bangladesa sy ny Mianmara any atsinanana. Eo amin'ny ranomasimbe Indianina, tsy lavitry ny repoblikan'i Maldiva (any atsimo andrefana), ny Seilàna (any atsimo atsinanana). Mizara sisintany miaraka amin'i Afganistàna koa i India any Avaratra Atsinanany.
Teo amin'ny tanin'i India no misy ny haifomba antitra indrindra eo an-tany. Misy finoana teraka teo amin'io kontinenta io, toy ny Bodisma, ny Jainisma, ny Hindoisma sy ny Sikisma.
Mandritry ny taonjato roa, i India dia zanatany anglisy; izy no zanatany ngeza indrindra an'ny Britanika. Nahazo ny fahaleovantenany i India tamin'ny 1947. Tamin'io fotoana io, misy ny kontoara frantsay sy portogey tao India, naverina ho an'i India ireo kontoira ireo teo aorian'ny fahaleovantena.
Nihanivoatra be i India tamin'ny dimy ambin'ny folo taona farany teo, indrindra tamin'ny fanombohana ny fiovana demografika nisy hatry ny 1991. Tamin'ny 22 Janoary 2007, niverina avy tany amin'ny habakabaka ny kapsily indianina tsy misy olona afaka 12 andro, nametraka marika siantifika sy ara-teknika be ho an'i India. Hatry ny taona 2008 anisan'ny hery ara-piharian-karena lehibe eto an-tany i India akaikin'i Sina, i Rosia ary i Brezily, ary i India no hery ara-piharian-karena fahavalo eto an-tany.
3.1 Fizaràn'ny faritany
4 Jere koa
Nipoitra tao India ireo fiteny klasika roa (fiteny sanskrity, fiteny tamily) misy eto amin'izao tontolo izao. Efa nampiasaina mandritry ny telo arivo taona ireo fiteny roa ireo. Namorona finoana antsoina hoe hindoisma ilay firenena, finoana izao mbola arahan'ny maro amin'izareo amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona telonjato tal. J.K., dia namorona ny empira ary ny Fiankohonana Maurya i Ashoka, izay nahavory ny ankamaroan'ny tanin'i Azia Atsimo ho anaty firenena iray. Tamin'ny taona 180 tal. J.K. dia voatafiky ny firenena maro samihafa i India na dia taty aoriana aza (100 – 1100), dia nipoitra ireo fiankohonana indianina hafa: izay ahitana ny Chalukya, Chola, Pallava ary ny Pandya. Tamin'izany fotoana izany dia nalaza tamin'ny siansa, ny zavakanto ary ny asa soratra ny faritra atsimon'i India.
Maro ireo fiankohonana nanjaka tao India nandritry ny taona arivo. Anisan'ireo ireo ny empira Mughal, Vijayanagara ary ny Maratha. Tamin'ny taona 1600 dia notafihan'ireo firenena eoropeana i India, ary voazanaky ny britanika tanteraka izy io nanomboka tamin'ny 1856 hatramin'ny taona 1947.
Taorian'ny 1947, i India dia nanana toe-karena sosialista voalahatra. Anisan'ny firenena mpikambana nanorina ny hetsiky ny tsy mpanaraka ary ny Firenena mikambana i India. Niatrika ady maro izy io taorian'ny fahaleovantenany tamin'ny Fanjakana Mikambana, anisan'izy ireo ny ady tamin'ny 1957-48, 1965, 1971 ary 1999 tamin'i Pakistana ary ny adin'ny 1962 tamin'i Sina. Niady ihany koa izy io mba haka an'i Goa, izay seranana natsangan'ny Portogey, ary tsy azon'i India raha tsy tamin'ny taona 1961. Nandà ny Portogey ka voatery naka azy an-keriny ny Indianina. Nanao fanandramana niokelary ihany koa i India tamin'ny 1974 ary 1998, ary anisan'ireo firenena vitsy manana fitaovam-piadiana niokleary. Anisan'ireo toe-karena mitombo haingana indrindra eto an-tany ny toe-karen'i India nanomboka tamin'ny taona 1991.
An'i India ny ankabiazan'ny zana-kontinenta Indianina. Miraikitra amin'i Aostralia ilay zana-kontintenta amin'ny resaka plaky: ny plaky Indô-Aostralianina. Mikasika kely ny tendrombohitra Himalaya ny avaratr'i India. Eo antsimon'i Himalaya dia misy saha tena mahavokatra indrindra any India: Ny tany Indô-Ganjetìka no anaran'izy io. Any andrefana, misy ny tanimatin'i Thar. Any antsimo, dia misy plateau voafaritra any avàrany amin'ny Gaty Andrefana sy any antsinanany amin'ny Gaty Antsinanana.
Andhra Pradesh Hyderabad Telugu 276 754 76 210 007 1956
Arunachal Pradesh Itanagar Hindi 83 578 1 097 968 1987
Assam Dispur Assamais 78 438 26 655 528 1947
Bengala Andrefana Kolkata Bengali 88 752 80 176 197 1960
Bihar Patna Hindi 94 163 82 998 509 1947
Chhattisgarh Raipur Hindi 135 133 20 833 803 2000
Goa Panaji Konkani 3 702 1 347 668 1987
Haryana Chandigarh Hindi 44 212 21 144 564 1966
Himachal Pradesh Shimla Hindi 55 673 6 077 900 1971
Jammu-sy-Kasimira Srinagar Kashmiri, ourdou 222 236 10 143 700 1947
Jharkhand Ranchi Hindi 79 714 26 945 829 2000
Kerala Trivandrum Malayalam 38 863 31 841 374 1956
Madhya Pradesh Bhopal Hindi 308 000 60 348 023 1956
Manipur Imphal Manipuri 22 356 2 166 788 1972
Meghalaya Shillong Garo, khasi, angisy 22 489 2 318 822 1972
Orissa Bhubaneswar Oriya 155 842 36 804 660 1949
Penjab Chandigarh Penjabi 50 362 24 358 999 1956
Rajasthan Jaipur Hindi 342 239 56 507 188 1956
Sikkim Gangtok Nepalesa 7 107 540 851 1975
Tripura Agartala Bengali 10 477 3 199 203 1972
Uttarakhand Dehradun Hindi 53 483 8 489 349 2000
Uttar Pradesh Lucknow Hindi 236 286 166 197 921 1950
Indian Readership Survey 2012 Q1 : Topline Findings. (PDF) Media Research Users Council. Retrieved on 12 September 2012.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=India&oldid=998832"
Dernière modification le 10 Desambra 2020, à 14:04
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2020 amin'ny 14:04 ity pejy ity.